သတ်သေအရေအတွက်စပိန်နိုင်ငံတွင်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်နှင့် WHO က (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့) တိုင်း 40 စက္ကန့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သူ၏အသက်တာနှင့်အတူအဆုံးသတ်အမျိုးအစားကပြောပါတယ်။
20 ဒီဇင်ဘာလ 2017 မမြင်နိုင်သော Sociedad 8
သတ်သေ: ကမ်ဘာပျေါတှငျ 100.000 လူတွေနှုန်း 12 အသတ်မရှိပိတ်ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်နှင့်အမျှဝေးပျမ်းမျှအားသက်ဆိုင်ရာအတိုင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့ကဂျပန်ကနေလာရသောအခါ 45 လူတွေရောက်ရှိကတည်းကကအချိုးညီမျှမှုအတွက်အဆုံးအဖြတ်မဟုတျပါဘူး, ရုရှား, ကိုရီးယား, အရှေ့အာဖရိကနှင့် ကျနော်တို့မက္ကစီကို, အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ထွန်းနိုင်ငံများတွင်ရည်ညွှန်းလျှင်ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချအိန္ဒိယ, ။ စပိန်အတွက်ကိန်းဂဏန်းများကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တိုးကြိုးစားပါသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးခြေလှမ်းကိုမယူအကူအညီတောငျးသူတွေကို၏နံပါတ်ပေါ်တူနှုန်းကိုတိုးမြှင့်နေချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်များ၏5နှင့်6တထောင်တရာနှုန်းနေရာချထားအကြားမွှေရန်လာကြသည် အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက် 40 တစ်ဦးကိုသူတို့ finiquitarse မတူသူများဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပေါက် "သံသယ" ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုဟန်သောသူ၏အသက်တာကိုအဆုံးသတ်။
အမျိုးသမီးများနေ့ယောက်ျားထက် sucidarse ပိုပြီးကြိုးစားကြသို့သော်နှုန်းထားများအမြဲမတှေ့သံသယနှင့်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပင်လယ်၌ sails သောစိတ်ပျက်စရာဆုံးဖြတ်ချက်၏ကြောင်း ပို. ပို. ငယ်ရွယ်သားကောင်များကြိုတင်ခန့်မှန်းကြပါသော်လည်း, 65 ကျော်နှစ်များတွင် ပို. ထိရောက်စွာပြုလုပ်စီမံခန့်ခွဲသူကိုလူဖြစ်ကြ၏ မကြာခဏရန်ပုံငွေစိတ်ခံစားမှုငွေညှစ်၏ပုခုံးတွအတူကွံစီမံကိန်းအခါဖျက်သိမ်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုထုတ်သယ်ဆောင်ရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားများအတွက်ဘာသာရပ်အကြောင်းပြချက်အတွက်မတည်မနေမပြပါရန်မရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အခါသင်စိုးရိမ်ပူပန်ရပါမည်ဆိုပါက, အဖြေတစ်ခုရှာသူတို့ကိုယ်သူတို့မွှုပျနှံ မြီးကောင်ပေါက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အဘို့, သက်တောင်စားသုံးမှုအဘို့မိမိတို့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်တစ်အတိုင်းအတာအဖြစ်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြရသော
ငြူစူသောစိတ်, လက်စားချေ, မိသားစုခိုက်ရန်တစ်လက္ခဏာတွေ့ရှိကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်လျောက်ပတ်သောအလုပ်, မလုံခြုံမှု, တို့အတွက်, အထီးကျန်ဆန်, အလွန်အကျွံစားသုံးမှု, စိတ်ကျန်းမာရေး၏ပြည်နယ်ရှာဖွေတာမဟုတ်၏ခွန်အားမရှိခြင်းသော်လည်းမ Self-ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်အဖြစ်ကိုရိပ်မိခံရဖို့လုံလောကျတမျး, စေထူးဆန်းရှုထောငျ့များမှာ နိုင်ငံသားအဖြစ် @ s ကို ဒီတိုင်းပြည်အတွက်မျက်စိကန်းခြင်းနှင့်နှေးကွေးသောအကူအညီပေးရေး၏အစီအစဉ်အတွင်းနှင့်ဆရာဝန်များနှင့်စိတ်ပညာရှင်အပျနှံတွေနဲ့ပြင်ပေးဖို့ကြိုးစားရှိရာကန့်သတ်ဘတ်ဂျက်အရင်းအမြစ်များ, နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူတားဆီးအခြေခံဆေးတစ်လက်နှင့်အတူတစ်ဦးမြို့တော်စိတ်ကျရောဂါတိုးပွားလာနေသည်ခံရ သူတို့အားစာရင်းဇယားအများအပြားဟာသူတို့ရဲ့မသေချာလှဖြစ်တည်မှုကိုအဆုံးသတ်မယ့်မော်တော်ယာဉ်သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ .. တစ်ဦးအသွားအလာမတော်တဆမှုအဖြစ်အဖြစ်အပျက်ဘာသာပြန်ဆို, မဖုံးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအိမ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ကြောင်းအခြားအဖြစ်ရပ်မှန်များကိုအောက်တွင်ရှိပါသည်စေသည်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်။
ကျနော်တို့မကြာခဏကွန်ရက်ပေါ်တွင်ကို virtual အစည်းအဝေးများ၏ကွန်ယက်များအားဖြင့်လျော့ပါးတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နှင့်တိုက်ရိုက်အတိမ်အနက်ကိုထိုက်မယ်လို့ခိုင်မာတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြဿနာများနှင့်အတူတစ်နှစ် 2017 ပိတ်ဖို့နှင့်အစပိုင်းတွင်ကျွန်တော်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးတစ်ခုစနစ်တကျယိုယွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ဦးမည် , ထိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုစွဲလမ်းကုထုံးကွိုးစားအားထုဒါပေမယ့်စပိန်အတွက်ရပ်တန့်ပါဘူး လူလေးယောက်အတွက်တဦးတည်းအထီးကျန်အသက်ရှင်နေထိုင်တစ်ဦးတည်း, အခြားမည်သည့်ကုမ္ပဏီအချို့ကိစ္စများတွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တစ် function ကိုအစားထိုးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အတူ, တူညီတဲ့အခွအေနေ၌နေသောခံစားချက်များကိုမိမိတို့အမည်မသိ "Clone" ၏ကြွင်းသောအရာနှင့်အတူဝါသနာမျှဝေမပါဘဲ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေး။
တဦးတည်းသုံးအတွက်လူငယ်များလွတ်လပ်သောမဟုတ်ပေမယ့်သူကရောက်ရှိခဲ့ပါသည်ရှိရာအချို့သောနော်ဒစ်နိုင်ငံများအတွက်ပြီးသားကိစ္စဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့မယ့်ကမ်ပိန်း, အသက်အားဖြင့်သာကွာခြားကြောင်းနှစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ထမ်းဘိုးတို့ကိုအကြား link ကိုကုမ္ပဏီရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှစတင်သည် အထီးကျန်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်လေ့လာမှုသို့မဟုတ်အလုပ်သူတို့ရဲ့နေရာအရပ်အနီးရှိဟောင်းတည်ငြိမ်အာကာသအသက်ရှင်ဖို့လျော့နည်းသက်သာစေရန်ချေး, သာ. ကြီးမြတ်စဉ်းစားတူအိမ်သူအိမ်သားအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိနေခြင်းနှင့်အတူနေထိုင်နေကြောင်းဝေစုအချိန်လေး။ တစ်ခုကအသိဉာဏ်သဘောထားနှင့်စပိန်နေဆဲဖြစ်ကောင်းပိုင်ဆိုင်မှု၏စိတ်ကူးအသုံးပြုပုံစတင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေနှင့်နေမကောင်း-ပဋိသန္ဓေနှင့်ဗီဇနီးပါး 20 သန်းအိမ်ထောင်စုများ၏အများအပြားအတွက်အမြစ်တွယ်အိမ်အများအပြားမှဖြစ်ကြောင်းနှစ်လိုဖွယ်ယူဆ မမြင်ရတဲ့အထီးကျန်, ကံကြမ္မာရဲစွမ်းသတ္တိကို ယူ. သူတို့၏ "အနာဂတ်" ဆုံးဖြတ်, ဆေးပြားများနှင့်ဆေးဝါးများတစ်ခုပိုလျှံကြိတ်ခွဲနှင့်အတူ စတင်. အဆိုပါဇာတ်ကောင်သင်၏အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးကော့တေးရော, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကညစ်တံဖြန့်ချိခြင်းသို့မဟုတ်ဟောင်းဓါးနဲ့သူ့ရဲ့လက်ကောက်လျှော့ချကြလတံ့သောအဘို့ရန် သံချေးတက်မီးဖိုချောင်, ဆွဲထား, ပြတင်းပေါက်အထဲကခုန်, မိမိအိမျမီးလောငျ ထား. , ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးလမ်းလျှောက်ယူ, တစ်ဦးဝမ်းနည်းဖွယ် suicidida ရှိကွောငျးကိုပြန်ပြောပြထားတဲ့မြင့်မားသောတံတား, ကနေပျက်ပြယ်သို့ခုန်အဆုံးသတ်ရေး, ငါသည်အခါနေ့တိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီ သငျသညျ recover ရန်ကြိုးစားခဲ့ဘယ်တော့မှအချိန်မှာနစ်မြုပ်က၎င်း၏အစဉ်အဆက် "အလိုရှိ" ကျရှုံးခြင်း, မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှအပြင်ထွက်သို့မဟုတ်ပြန်သွားပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆုံးဖြတ်သည်ဘာတားဆီးမထားသငျ့နှင့်လိုလိုလားလားသင်၏အိမ်နီးချင်းထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲပြုပါ, သင်မူကားတစ်ဦးကိုလက်ခံထားတဲ့အစွဲယာယီရှုပ်ထွေးပွေလီအောင်လုပ်ထဲကသူမ၏ကူညီလျှင်ရှေ့တော်၌, ရှင်သန်မှု၏စိတ်ဖောက်ပြန်, ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်သဘာဝအားဖြင့်သင်တို့ကိုအကြောင်းပြချက်တားဆီးကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးခွအေနမြေား တစ်ခုတိုးပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ကမ္ဘာကြီးကို။ ထိုအတုံ့၏အခိုက်ကျနော်တို့မဆိုနည်းလမ်းအကြံပြုလိုကျသောအခါအငြင်းအခုံအတွက်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖြစ်ခြင်းအော်ဖို့အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း: "ငါသည်နေရောင် @ တယ်, ငါအကူအညီလို"။ ဒါဟာတစ်ဦးထက်ပိုနားကိုဆိုးနှင့်အကျဉ်းဟာသ၏အဆုံးမရှိဘဲလျင်မြန်စွာသူ့ကိုတူသောတစ်စုံတစ်ဦးကနေအရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုကိုသှားဖို့ကသူ့မှတ်ဉာဏ်ကသူ့နားပင်း, ပြဇာတ်ရုံ၏နောက်ကျောတံခါးကိုမှတဆင့်သတ်သေ၏အတွေးတစ်ထောင့်၌ကျန်ကြွင်းသောအဖွယ်ရှိသည် သစ်တစ်ခုချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, မြော်လင့်ခြင်းနားလည်မှု, သတိနှင့်နှိမျ့ခခြွငျးနဲ့ညာဘက်မနက်ဖြန်တစ်အလားအလာဒုတိယ၏ပထမဦးဆုံးအပြုံးဖြစ်လာနိုင်ပါသည်, ကွဲပြားခြားနားသောအသက်တာ၏သစ်ကိုအစအဦးမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, ထိုကဲ့သို့သောလျှင်, သူတို့သည်ဖြစ်သကဲ့သို့ရှိရာပြဿနာများ solvable အစွန်းရောက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုခွင့်ပြု, နှင့်ပစ္စည်းရှိလျှင်ပင်နှင့်မျှမတို့အခြေခံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုလျှင်တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်အတူဖြစ်စေပေမယ့်, အဘယ်ကြောင့်, သူတို့ကို irremediable စိုးရိမ်ရေမှတ်တစ်ဦးချည်အတွက်တင်းမာမှုမြင့်တက်စေ လူသားတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏အခြေခံမူအပေါ်သစ္စာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ငါတို့သည် idearios သို့မဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော flagella မရှိဘဲအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်မှတ်ချက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုး, မင်းမဲ့စရိုက်ရင့်ကျက်သို့မဟုတ်မမြင်နိုင်တဲ့ဤ "ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့" သတ်သေ၏ဆိုးရွားစာရင်းဇယားအေးခဲဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုပြုကြောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်များ၏ဤအသစ်သောသံသရာ၌ကောင်းသောလိမ့်မယ် တစ်ဦး timeless နွေးထွေးမှုကြောင့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာအောင်ရန်သင့်အားသွန်းလောင်းရန်မညာဘက်မိုးရွာသွန်းမှုများရာမှတစ်ဦးမျက်ရည်ခန်းခြောက်ခြင်း, အခမဲ့အလိုတော်ရှိသည်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်မထားတဲ့အအေးကိုဖုံးလွှမ်းသောအခါ "Pre-empt" နောက်ဆုံးသဘာဝကအသက်ရှုဖို့ဝံ့, မည်သူမဆိုသို့မဟုတ်ဘာမှမထိုက်မပေး သငျသညျအနညျးဆုံးသငျသညျ .. သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ပင်သိချင်စိတ်အဘို့, rummaging ရှာတှေ့နိုငျရှာနေကြပါသည်အားလုံးနှင့်အခြားသူများပါလျှင်ဘာမျှမဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း, ဒါကြောင့်မျှော်လင့်ထား။
Francisco က Machalskys သူ says:
20 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 21: 05
Randy Rosales Olavarrieta
22 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 20: 36
သိပ်မရှိပါဘူး Thaily သူ says:
27 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 13: 19
Jusnay ကာရိုလိုင်းနား Rangel Garcia က သူ says:
28 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 20: 58
Arminda Nohemi Naveda Lehmann သူ says:
29 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 13: 41
မိမိကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံစည်ရန်ခရစ်ယာန်မဆန်စွာဝါဒဖြန့်, insita ငြင်းပယ်ခြင်း
ဟိုဆေး Liendo သူ says:
29 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 18: 48
Carmelo ဗစ်တာ Rivas Bellebet သူ says:
1 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 18: 02
ဒိုဖာနန်ဒက်ဇ သူ says:
1 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 19: 41